“ကြေကွဲဖွယ် တိုက်ဆိုင်မှုများနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ အပြင်ဘက်ကို ဆေးမသုတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း” – စှယျစုံသုတ
“ကြေကွဲဖွယ် တိုက်ဆိုင်မှုများနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ အပြင်ဘက်ကို ဆေးမသုတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း”
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ (Convocation Hall ) အပြင်ဘက်ကို ဘာ့ကြောင့် ဆေးမသုတ် ကြတာလဲ?????
✍️၁၉၆၂ ခုနှစ် တွင် ပထမတခါဆေးသုတ်ခဲ့သည်။
ထိုနှစ်7July တွင် ကျောင်းသားအရေးအခင်းဖြစ်ပြီး၊ သမိုင်းဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ Rangoon University Student Union (RUSU) အဆောက်အဦးကိုလည်း ဖျက်စီးပစ်ခဲ့၍ ကျောင်းသားအများအပြားကြွေလွင့်ခဲ့ရသည်။
✍️ ထိုနောက် ၁၃နှစ်အကြာ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်ထပ်၍ ဆေးသုတ်ခဲ့သည်။ထိုအကြိမ်တွင် ဦးသန့် အရေးအခင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားများ ဖိတ်ဆင်ခဲ့ပြီး လူထုအုံကြွမူတခု ဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်။
✍️ထိုနောက် မယုံတဝက်ယုံတဝက်နှင့်တိုက်ဆိုင်မူ တခုသာသဘောထားပြီး နောက်ထပ် ၁၃ နှစ်အကြာ …၁၉၈၈ ဖေဖော်ဝါရီလ တွင် တတိယအကြိမ်ဆေးထပ်သုတ်ခဲ့ ကြသည်။ဤတွင်လည်း ရှေးကနည်းတူ လူထုအုံကြွ ကျောင်းသားအရေးအခင်းကြီးထပ်ဖြစ်ကာ ကျောင်းသားများအသက်စတေးခဲ့ရလေသည်။
✍️ ယုံချင် ယုံ မယုံချင်နေ ပါ သို့ ပေ မယ့်နှစ်ကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပျက်ခြင်းကို တိုက်ဆိုင်မူ ဟု ခေါ်သော်ငြားလည်း သုံးကြိမ်မြောက်သွေးထွက်သံယို နှင့် ရှေးကအဖြစ်အပျက်နည်းတူ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ကို ကြီးမားစွာ ပြောင်းလဲခြင်းကို တော့ လက်မခံ၍ မရတောပေ။
?ထိုအချိန်မှစတင်ကာ ကျောင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ မှလွဲ၍ ကျောင်းတဝန်းလုံးရှိအဆောက်အဦးမှန်သမျှကိုသာဆေးသုတ်ခြင်းများသာ ပြုလုပ်ကြတော့သည်။
?ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆေးမသုတ် ပဲ မူလအတိုင်းထားရှိသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(Convocation Hall )သည်ပို ၍တည်ငြိမ် ရင့်ကျက် ခန့်ငြားမူရှိသော သဘောကို ဆောင်‌ နေသည်ဟုထင် မြင်မိပါသည်။
✍️တို့ အတူ ဆေးသုတ်ခြင်း မသုတ်ခြင်းထက် အနာဂတ်ရဲ့ အားကိုးရမည့် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များကို အမြဲတန်းထာဝရ မွေးထုတ်ပေး နေ မှာ ဧကန် မလွဲ ဖြစ်ပါတော့သည်။
Credit…Old but Gold.
Credit… Original photo.
“ကွကှေဲဖှယျ တိုကျဆိုငျမှုမြားနှငျ့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ဘှဲ့နှငျးသဘငျခနျးမ အပွငျဘကျကို ဆေးမသုတျရတဲ့ အကွောငျးအရငျး”
ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ဘှဲ့နှငျးသဘငျခနျးမ (Convocation Hall ) အပွငျဘကျကို ဘာ့ကွောငျ့ ဆေးမသုတျ ကွတာလဲ?????
✍️၁၉၆၂ ခုနှဈ တှငျ ပထမတခါဆေးသုတျခဲ့သညျ။
ထိုနှဈ7July တှငျ ကြောငျးသားအရေးအခငျးဖွဈပွီး၊ သမိုငျးဝငျ ရနျကုနျတက်ကသိုလျကြောငျးသားသမဂ်ဂ Rangoon University Student Union (RUSU) အဆောကျအဦးကိုလညျး ဖကျြစီးပဈခဲ့၍ ကြောငျးသားအမြားအပွားကွှလှေငျ့ခဲ့ရသညျ။
✍️ ထိုနောကျ ၁၃နှဈအကွာ ၁၉၇၅ ခုနှဈတှငျ ဒုတိယအကွိမျထပျ၍ ဆေးသုတျခဲ့သညျ။ထိုအကွိမျတှငျ ဦးသနျ့ အရေးအခငျး နှငျ့ ပတျသကျ၍ ကြောငျးသားမြား ဖိတျဆငျခဲ့ပွီး လူထုအုံကွှမူတခု ဖွဈခဲ့ပွနျသညျ။
✍️ထိုနောကျ မယုံတဝကျယုံတဝကျနှငျ့တိုကျဆိုငျမူ တခုသာသဘောထားပွီး နောကျထပျ ၁၃ နှဈအကွာ …၁၉၈၈ ဖဖေျောဝါရီလ တှငျ တတိယအကွိမျဆေးထပျသုတျခဲ့ ကွသညျ။ဤတှငျလညျး ရှေးကနညျးတူ လူထုအုံကွှ ကြောငျးသားအရေးအခငျးကွီးထပျဖွဈကာ ကြောငျးသားမြားအသကျစတေးခဲ့ရလသေညျ။
✍️ ယုံခငျြ ယုံ မယုံခငျြနေ ပါ သို့ ပေ မယျ့နှဈကွိမျမွောကျ ဖွဈပကျြခွငျးကို တိုကျဆိုငျမူ ဟု ချေါသျောငွားလညျး သုံးကွိမျမွောကျသှေးထှကျသံယို နှငျ့ ရှေးကအဖွဈအပကျြနညျးတူ မွနျမာ့နိုငျငံရေး ကို ကွီးမားစှာ ပွောငျးလဲခွငျးကို တော့ လကျမခံ၍ မရတောပေ။
?ထိုအခြိနျမှစတငျကာ ကြောငျးမှတာဝနျရှိသူတို့သညျရနျကုနျတက်ကသိုလျ ဘှဲ့နှငျးသဘငျခနျးမ မှလှဲ၍ ကြောငျးတဝနျးလုံးရှိအဆောကျအဦးမှနျသမြှကိုသာဆေးသုတျခွငျးမြားသာ ပွုလုပျကွတော့သညျ။
?ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ ဆေးမသုတျ ပဲ မူလအတိုငျးထားရှိသော ရနျကုနျတက်ကသိုလျ(Convocation Hall )သညျပို ၍တညျငွိမျ ရငျ့ကကျြ ခနျ့ငွားမူရှိသော သဘောကို ဆောငျ‌ နသေညျဟုထငျ မွငျမိပါသညျ။
✍️တို့ အတူ ဆေးသုတျခွငျး မသုတျခွငျးထကျ အနာဂတျရဲ့ အားကိုးရမညျ့ မြိုးဆကျသဈ လူငယျမြားကို အမွဲတနျးထာဝရ မှေးထုတျပေး နေ မှာ ဧကနျ မလှဲ ဖွဈပါတော့သညျ။
ကငျးမွီးကောကျ ကငျးခွမြေား ကိုကျခံရလြှငျ အမွနျဆုံးနှငျ့အလှယျဆုံး အဆိပျဖွနေညျး
ဘယျသောအခါမှ မကွီးပှားနိုငျမယျ့ သားသမီးအမြိုးအစားမြား